कसरी डिजिटल ग्राहक मार्केटिंग मार्फत तपाइँको ग्राहकहरु सम्म पुग्ने - सामूहिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
मार्च 16, 2021 मार्च 16, 2021 इप्शिता शेखावत अरबी फ्रीलान्स, एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, भारत, भारत फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, भारत थोक र B2B, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
कुनै पनि मार्केटिंग रणनीतिको पहिलो चरण भनेको अनुसन्धान हो।
आजको संसारमा सबैले सामाजिक मिडिया प्रयोग गरेको कारण, तपाईं सजिलैसँग विशाल श्रोताहरूको पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
एक पप-अप बक्स वा एक अवरोध सन्देश थप्न कोसिस गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई तपाईंको अवस्थित ग्राहकहरूबाट साँचो समीक्षा निकाल्न मद्दत गर्दछ।
यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईंलाई डिजिटल मार्केटिंगको मद्दतले तपाइँका ग्राहकहरू समक्ष पुग्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईंलाई लाग्दछ कि ईमेल मार्केटिंगको लागि केहि पुरानो हो भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ!
१. तपाईका श्रोतालाई राम्ररी चिन्नुहोस्
कुनै पनि मार्केटिंग रणनीतिको पहिलो चरण भनेको अनुसन्धान हो। तपाइँको दर्शकलाई चिन्ने र कहाँ लक्षित गर्ने दुई चीजहरू जुन आधार निर्माण गर्दछन्। एक मार्केटरको रूपमा, हामी निश्चित छौं कि तपाईंसँग धेरै टन र प्रयोगकर्ता डेटाको पहुँच छ जुन तपाईंलाई तपाईंको दिशा फेला पार्न मद्दत गर्दछ। तपाईं गुगल ऐडवर्ड्स वा कन्सोल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको अनुसन्धानको लागि डाटा ल्याउनमा मद्दत गर्दछ। तपाईंको दर्शकले के सोचिरहेको छ भनेर जान्नको लागि, तपाईं अन्य मिडिया सुन्ने उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको व्यवसायको लागि कान हुनेछ। यदि तपाइँ अझै पनी अझै सुराग छैन भनेaमा पुग्न भारतमा डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी तपाईले गर्न सक्ने उत्तम चीजहरू मध्ये एक हो।
२. मार्केटिंगमा सोशल मिडिया प्रयोग गर्दै
आजको संसारमा सबैले सामाजिक मिडिया प्रयोग गरेको कारण, तपाईं सजिलैसँग आफ्नो क्याडरको विशाल दर्शकहरूको पहुँच पाउन सक्नुहुनेछ। जानकारी बाहिर पठाउनको लागि सोशल मिडिया प्रयोग गर्ने राम्रो अंश भनेको तपाईंले त्यहाँ दर्शकहरूको एक विशाल विविधता पाउनुहुनेछ। पुरानो देखि जवान तपाईं यो नाम र तपाईं यो छ! आकर्षक पोष्ट र सामग्रीको मद्दतले तपाईं सजिलैसँग तपाईंको श्रोताको आँखा लिन सक्नुहुन्छ र त्यो जडान कायम राख्न, तपाईंलाई थाहा छ तपाईं आफ्नो सामग्रीसँग एकरूप हुनुपर्दछ। एक ब्रान्ड मात्र चिन्न सकिन्छ यदि तिनीहरूले केहि असाधारण केहि गरे वा यस्तै बिन्दु दोहोर्याउँथे भने। जस्तै एयरटेल नेटवर्क विज्ञापन वा म्यागी!
Reviews. समीक्षाका माध्यमबाट तपाइँका ग्राहकहरूको संलग्नता
व्यक्तिहरूले यसलाई मनपराउँदछन् जब तपाईं उनीहरूलाई साँच्चिकै देखाउनुहुन्छ र वास्तविक समीक्षाको सहयोगमा तपाईंको व्यवसायलाई ब्रान्डि customers्ग ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न उत्तम चीज हुन सक्छ। एक पप-अप बक्स वा एक अवरोध सन्देश थप्न कोसिस गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई तपाईंको अवस्थित ग्राहकहरूबाट साँचो समीक्षा निकाल्न मद्दत गर्दछ। एकचोटि तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको काम कती कडा र इमान्दार छ भनेर थाहा छ हामी निश्चित छौं तिनीहरू तपाईंसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्। यदि तपाईं यो जटिल फेला पार्दै हुनुहुन्छ भने डायल-अप भारतको सर्वश्रेष्ठ डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीमा र आज तपाईंको काम सुरु गर्नुहोस्!
अर्गानिक पहुँच यस्तो चीज हो जुन लामो समय सम्म रहन्छ, न्यूनतम लगानीको आवश्यक पर्दछ, र तपाईंलाई वास्तविक ग्राहकहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ!
Email. रणनीति मध्ये एकको रूपमा ईमेल प्रयोग गर्दै
यदि तपाईंलाई लाग्दछ कि ईमेल मार्केटिंगको लागि केहि पुरानो हो भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ! ईमेल मार्केटिंगले काम गर्दछ जब तपाईं नयाँ ग्राहकहरूलाई तपाईंको व्यवसायमा संलग्न गराउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो अवस्थित ग्राहकहरूसँग सम्पर्कमा रहन चाहानुहुन्छ भने, व्यक्तिगत ईमेलहरू पठाउन उनीहरूलाई धेरै आकर्षक लाग्न सक्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईं तिनीहरूलाई स्प्याम गर्न लाग्नु हुनेछ। ईमेल मार्केटिंगका केही नियमहरू छन् र तपाईंले ती पालना गर्न आवश्यक छ। डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी चेन्नईले आफ्नो पहुँच बढाउन यी प्रविधिहरूलाई अनुसरण गर्दछ। नियमित न्यूजलेटरहरू पठाउने प्रयास गर्नुहोस्, ईमेलहरू स्वागत गर्नुहोस्, र उनीहरूको सानो परिवारको सदस्य बनिने पछि फेरि अनुसरण गर्नुहोस्!
Out. कार्बनिक तरिका पुग्न कहिल्यै नबिर्सनुहोस्
अर्गानिक पहुँच यस्तो चीज हो जुन लामो समय सम्म रहन्छ, न्यूनतम लगानीको आवश्यक पर्दछ, र तपाईंलाई वास्तविक ग्राहकहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ! हो, हामी तपाईंको ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, तपाईंको कार्यक्रमको लागि एक वास्तविक दर्शकहरू भेला गर्ने उत्तम तरिकाहरू। त्यसोभए विज्ञापनमा मोटो रकम खर्च गर्नुको सट्टा ब्लगहरू लेख्न र तपाईंको वेबसाइटको लागि सामग्रीलाई अनुकूलित गर्न केहि समय खर्च गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामग्री मौलिक छ र तपाईंलाई ग्राहकहरू भेट्टाउन मनपर्‍यो कि जस्तो कुरालाई प्राथमिकता छ।
यी केहि डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरू छन् जसले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहक बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ तर, तपाईंले एउटा कुरा याद गर्नुपर्दछ र त्यो धैर्य हो! जुन बिना तपाईं लामो-अवधि लक्ष्यहरू कहिले लक्ष्य गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं रातारात परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने सोचमा र एक हप्ता कडा परिश्रम तपाईंलाई राम्रोसँग भुक्तानी गर्न गइरहेको छ। त्यो सपना जस्तो देखिन्छ! यदि तपाइँ दीर्घकालीन ग्राहकहरू लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ भने धैर्य कुञ्जी हो। डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी चेन्नई सही रणनीतिमा तपाइँको रणनीतिहरू व्यवस्थित गर्न र तपाइँलाई इच्छित परिणामहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। जानकारी लिनु कसैलाई हानि गर्दैन, हुनसक्छ तपाईले यस्तो चीजको बारेमा जान्नु भएको छ जुन तपाईले पहिले कहिल्यै थाहा नपाउनु भएको छ।
सांप्रदायिक समाचार डिजिटल मार्केटिंग सेवाहरू डिजिटलमार्केटिंग
Ipshita एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हो र डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीको लागि काम गर्दछ। उनी डिजिटल मार्केटिंग, SEO, वेबसाइट डिजाईन र ब्लगिंगको बारेमा लेख्न मन पराउँछिन्।
IRS करदातालाई नयाँ फारमहरू, सञ्चार प्राथमिकताहरूको साथ बहु भाषाहरूमा मद्दत विस्तार गर्दछ